ပထမကားထက်အများကြီးပိုလန်းမယ်လို့ဆိုထားတဲ့ 'Jurassic World: Fallen Kingdom' - Trailer ထွက်ပြီ - MoviesFan
ပထမကားထက်အများကြီးပိုလန်းမယ်လို့ဆိုထားတဲ့ ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ – Trailer ထွက်ပြီ
Jurassic World ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ဝင်ငွေစုစုပေါင်း $ 1.67 billion နဲ့ စတုတ္ထမြောက်ဝင်ငွေအရရှိဆုံးဇာတ်ကားအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ အဲဒီလိုဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားထက်ပိုလန်းမယ်လို့ဆိုထားတဲ့ ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ ကဘယ်လိုများတောင်လဲ။ သိချင်သပဆိုရင်တော့ အမြည်းအစမ်းအနေနဲ့ မကြာသေးမီကထွက်ရှိထားတဲ့ သူ့ရဲ့ပထမဆုံး Trailer ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ J.A. Bayona ဟာ Empire မဂ္ဂဇင်းနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်က “Fallen Kingdom ဟာ James Bond ဇာတ်ကားတွေလို အက်ရှင်ခပ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ဇာတ်လမ်းဖွင့်မှာပါ။ ပြီးတော့ ဒီကားရဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေက Jurassic ဇာတ်ကားအားလုံးထက်ပိုပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားမှာပါ။” လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Fallen Kingdom starts withamassive action piece that feels likeaJames Bond prologue,
and in the centre there is the biggest set-piece ever done foraJurassic movie.
Fallen Kingdom မှာ လူတွေက ပေါက်ကွဲလုဆဲဆဲမီးတောင်ကြီးရန်ကြောင့် မျိုးတုန်းမယ့်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Isla Nublar ကျွန်းပေါ်က ဒိုင်နိုဆောတွေကို ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မန်နေဂျာဟောင်း Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) က ဒီဒိုင်နိုဆောတွေကိုကယ်တင်ဖို့ ဒိုင်နိုဆောကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး သူ့ကိုကူညီဖို့ trainer ဟောင်း Owen Grady (Chris Pratt) ကိုအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ မီးတောင်ကြီးရဲ့ရန်၊ ဒိုင်နိုဆောတွေရဲ့ရန်တွေကြားကနေ သူတို့ရည်မှန်းချက်ကို ဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ ရုံတင်မယ့် ၂၀၁၈ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ပိတ်ကားပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Previous Post: Thor ကို စစ်သားတစ်ယောက်အဖြစ် မြင်တွေ့ရဉီးမယ့် 12 STRONG
Next Post: Maze Runner ရဲ့ မကြာခင်ပြသတော့မယ့် The Death Cure